आफ्नै दमले बलिउडमा कब्जा जमाउन सफल सेलिब्रेटीहरु - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
आफ्नै दमले बलिउडमा कब्जा जमाउन सफल सेलिब्रेटीहरु
भदाै २९ । बलिउडमा अहिले आफ्नै आफ्नाको मात्र भिड देखिने गरिएको छ । कसैको छोराछोरी त कसैको भाइबहिनी , भतिज जस्ता आफ्नै नातेदारलाई बलिउडमा प्रवेश गराएर स्थापित गराउने चलन अहिले फस्टाइरहेको छ । तर, कतिपय कलाकार यस्ता पनि छन् जसले कसैको साथ र सहयोग बिनै आफ्नै भोगाईबाट बलिउडमा सफलता हासिल गरेका छन् ।
१. कंगना रनावत
सन् २००६ को फिल्म ‘ग्याङस्टर’बाट बलिउडमा प्रवेश गरेकी कंगना अहिले सफलता र चर्चाको शिखरमा पुगिसकेकी छन् । नेशनल अवार्ड समेत जितिसकेकी यी अभिनेत्रीले आफ्नै मिहिनेत र अनेक कठिनाईहरु सहेर बलिउडमा स्थान जमाएकी हुन् । उनले कसैबाट पनि सिफारिस र सहयोग पाएकी थिइनन् ।
अभिनेता अक्षय कुमारको पनि कुनै फिल्मी पृष्ठभूमी छैन । अभिनेताका रुपमा उनले धेरैपटक अस्वीकार भएर अपमानित हुनु परेको थियो तर लगातारको कोशिस र कडा मिहिनेतपछि मात्रै उनले आज सफलता चुम्न पाएका हुन् ।
३. शाहरुख खान
बलिउडका बादशाहका नामले चिनिने अभिनेता शाहरुख खानले पनि बलिउडमा प्रवेश गर्नु अघि धेरै धक्का खानुपरेको थियो । फिल्मी पृष्ठभूमी नभएकाले आफ्नो पहिचान बनाउनका लागि धेरै कठिन परिस्थितिहरुको सामना गरेका हुन् । कसैको सिफरिस नपाइकनै बलिउडमा सफलतापूर्वक स्थापित हुन सकेको अभिनेतामा उनी पनि पर्दछन् ।
४. ऐश्वर्या राय
ऐश्वर्या रायले सन् १९९४ मा मिस वर्ल्डको ताज पहिरेपछि फिल्म लाइनमा आउने निर्णय लिएकी थिइन् । उनी प्रवेश गर्नुअघि उनको पनि बलिउडसँग कुनै सम्बन्ध थिएन । उनी आफ्नै मिहिनेत र चमकले फिल्मी क्षेत्रमा छाउन सकेकी हुन् ।
५. दीपिका पादुकोण
दीपिका पादुकोणका पिता टेनिस खेलाडी हुन् र उनी खेलकुदको पृष्ठभूमीबाट आएकी हुन् । उनी आफैँले पनि राष्ट्रका लागि खेलिसकेकी छन् । यस्तोमा उनले कसैको सहयोग बिनानै बलिउडमा प्रवेश गरी आफ्नो पहिचान बनाउन सक्षम भएकी हुन् । उनको पहिलो फिल्म नै अभिनेता शाहरुख खानसँग भएर पनि उनी भाग्यमानी सावित भएको बताइन्छ ।
६. अनुष्का शर्मा
अभिनेत्री बन्ने लक्ष्य लिएकी अनुष्का शर्माले पनि धेरै प्रतिस्पर्धा र कठिनाइपछि मात्र आफूलाई स्थापित गर्न सकेकी हुन् । उनको सफलताको श्रेय उनी आफैँले पाउँछिन् ।
७. रणवीर सिंह
रणवीर सिंहले पनि बलिउडमा कोही आफ्ना नहुँदा नहुँदै आफ्नै संघर्षले सफलता हासिल गरेका हुन् ।
८. प्रियंका चोपडा
सन् २००० मा मिस वर्ल्ड जितेपछि बलिउडमा प्रवेश गरेकी प्रियंकाले पनि आफ्नै बलमा आजको स्थानमा पुगेकी हुन् । उनले आफ्नो कालाकारिता र अभिनयले धेरै दर्शकहरुको मन जित्न सफल भएकी हुन् । अहिले उनी हलिउडमा समेत चर्चित छिन् ।
९. नवाजुद्दिन सिद्दिकी
नवाजुद्दिन सिद्दिकीले पनि फिल्मी पृष्ठभूमी नहुँदा पनि संघर्ष गरेरै बलिउडमा आफ्नो पहिचान बनाएका हुन् । उनको अभिनयलाई दर्शक लगायत थुप्रै ठूला कलाकारहरुले समेत मन पराउने गर्छन् ।
यी हुन् सँगै काम गरेपनि एकअर्कालाई डाहा गर्ने बलिउड सेलिब्रेटी
भदाै २८ । बलिउडमा कतिपय यस्ता अभिनेत्री र अभिनेताहरु छन् जसले एक अर्कालाई पटक्कै मन पराउँदैनन् । देख्न समेत […]
‘पद्मावती’मा दिपिकाले लगाइन् बनाउनै ६०० दिन लागेको ४०० किलो सुनका गहना
असनेपाल न्युज । निमार्ता संजय लिला भंसालीको १६० करोडमा बन्न लागेको आगामी फिल्म ‘पद्मावती’ ट्रेलर रिलिज […]
हेमा मालिनीले बर्बाद पारेकी थिइन् शाहरुख-गौरीको बिहेको पहिलो रात
असनेपाल न्युज । बलिउड अभिनेता शाहरुख खान र उनकी पत्नी गौरी खानले हिन्दू परम्परा अनुसार बिहे गरेको २६ वर्ष […]
पागल प्रेमी सलमान खान
असनेपाल न्युज । बलिउडका दंवग नायक सलमान खान आफ्नो पोजेसिभनेसका कारण मिडियामा निकै लोकप्रिय रहेका छन् । […]
यस कारण ‘गोलमाल-४’ मा करीनालाई खेलाएनन् रोहितले ?
असनेपाल न्युज । निर्माता रोहित शेट्टीले निर्माण गरेका गोलमालका सबै भागले बक्स अफिसमा राम्रै सफलता हात पारे […]
यस्तो छ अक्षय-ट्विंकल बस्ने आलिशान महल
एजेन्सी । बलिउडका खेलाडी अक्षय कुमारकी पत्नी ट्विंकल र दुई बच्चा आरव र नितारा मुम्बईमा रहँदै आएकी छन् […]